गर्मीमा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
गर्मीमा र सामान्य मौसमा छालाको स्याहार गर्ने तरिका फरक हुन्छ, एउटै उपायले काम गर्दैन । विशेष गरी गर्मी मौसममा सूर्यको ताप तथा बाह्य तापक्रमका कारण शरीरमा पसिना आउँछ । पसिनाका कारण छाला भित्र र बाहिर प्रभाव पर्छ । जसका कारण घमौरा आउने, फंगल इन्फेक्सन हुने (छालामा घाउ हुने), दाद, दुबी आउने, छाला बाक्लो हुने र चिलाउने लगायतका रोगहरू लाग्छन् । हामी कसैलाइ पनि आफ्नाे उमेरभन्दा पहिले नै बुढाे देखिन रहर हुदैन त्यसैले शरीरमा सीधै सूर्यको प्रकाश परेमा छाला उमेरभन्दा पहिल्यै चाउरी पर्छ ।
गर्मी मौसममै ठेउला तथा दादुरा आएमा पनि छालामा बिबिरा तथा फोका देखिन्छन् । खेतबारीमा काम गर्ने किसानलाई पनि विभिन्न भुसुना तथा किराले टोकेर छालामा संक्रमण हुन्छ । छालाका लागि संवेदनशील मौसम भएकाले कुनै पनि संक्रमण हुन सक्छ । शरीर स्वस्थ भए मात्र छाला पनि स्वस्थ हुने भएकाले यो मौसममा नियमिति व्यायाम र स्वस्थ भोजन गर्नुपर्ने महाराजगन्जस्थित टिचिङ हस्पिटलका छालारोग विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार दासले बताए । कुनै कारणले छालामा घाउ भइहालेमा चिकित्सकको सुझावमा मात्र औषधि प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । प्राकृतिक र कृत्रिम दुई विधि अपनाएर छालाको हेरचाह गर्न सकिन्छ ।
पानीकाे वाफ लिने गर्नुहाेस् त अनुहारको छाला र फोक्सोलाई फाइदा हुन्छ
Don't Miss it तपाईले यी पेय पदार्थलाई नियमित सेवन गरेर उच्च रक्तचापको जोखिम कम गर्न सक्नुहुनेछ । आउनुहाेस् जानिराखाैँ
Up Next शाकाहारी बनेँ रोग र मृत्युदर कम हुन्छ, यति कुरा याद गर्नुहोस्